२०२२ को सबै भन्दा राम्रो सस्तो कफी मेसिनहरू - गाइड र प्रस्तावहरू खरीद गर्दै
सस्तो कफी निर्माताहरू
उत्तम कफी मेसिनहरू
कफी निर्माताहरूका प्रकार
क्याप्सूल कफी मेसिनहरू
सुपर स्वचालित कफी मेसिनहरू
इटालियन कफी मेसिनहरू
ड्रिप कफी निर्माताहरू
इलेक्ट्रिक कफी निर्माताहरू
प्लन्जर कफी निर्माताहरू
कोना कफी निर्माताहरू
बिल्ट-इन कफी निर्माताहरू
औद्योगिक कफी मेसिनहरू
कफी निर्माता ब्रान्डहरू
कफी र सामान
बरिस्ता कफी सामान
कफीको लागि थर्मस
सुझाव र युक्तिहरू
कफी मेकर सफा गर्दै
राम्रो क्यापुचिनो तयार गर्नुहोस्
कोल्ड ब्रू वा आइस्ड कफी
इटालियन कफी मेकर राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहोस्
कफी मेकर बिना कफी बनाउनुहोस्
सबै भन्दा राम्रो बिक्रेता
के कफी किन्न
सामान र थप
यदि तपाइँ कफी (र अन्य इन्फ्युजनहरू) मनपर्छ र तपाइँ सोच्दै हुनुहुन्छ एक आदर्श कफी निर्माता छनोट गर्नुहोस् जसले तपाईका आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ कि बजारमा अवस्थित विभिन्न प्रकारका विभिन्न प्रकारका कारण यो प्रायः सजिलो हुँदैन। र यदि कफी निर्माताको प्रकार रोज्न पहिले नै गाह्रो छ भने, त्यहाँ रहेका विभिन्न ब्रान्ड र मोडेलहरूको संख्या बीचमा नेभिगेट गर्न अझै गाह्रो छ।
अनिर्णित प्रयोगकर्ताहरूका लागि, यस वेबसाइटमा हामी तपाइँलाई तपाइँलाई थाहा हुनु पर्ने सबै कुरा सिकाउने प्रयास गर्न जाँदैछौं ताकि तपाइँ तपाइँको प्राथमिकता अनुसार तपाइँलाई कस्तो प्रकारको कफी मेकर चाहिन्छ भनेर निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ, र साथै, प्रत्येक मामलामा कुन ब्रान्ड र मोडेलहरू सिफारिस गरिन्छ। जुन तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ सबै भन्दा राम्रो सम्भव उत्पादन प्रत्येक मामला को लागी। थप रूपमा, यसले तपाइँलाई धेरै पैसा खर्च गर्नबाट रोक्नेछ, तपाइँ गुणस्तर उत्पादनको लागि उचित मूल्य तिर्दै हुनुहुन्छ भनेर सुनिश्चित गर्दै।
बजारमा उत्कृष्ट कफी मेसिनहरू
यदि तपाइँ आफैंलाई धेरै जटिल बनाउन चाहनुहुन्न वा तपाइँसँग पहिले नै केहि विचार छ, हुनसक्छ तपाइँलाई तपाइँको छनौट गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो कफी मेशिनहरू के हो भनेर जान्न आवश्यक छ। सारांशको रूपमा र प्रकार द्वारा भेदभाव बिना, यो हो हाम्रो मनपर्ने कफी मेसिनहरूको शीर्ष:
मीठो स्वाद शीर्ष
कफी मिसिन को प्रकार: आदर्श के हो?
त्यहाँ कफी निर्माता को एक मात्र प्रकार छैन, अन्यथा छनोट धेरै सजिलो हुनेछ। नयाँ छन् विद्युतीय मेसिनहरू जुन पूर्ण रूपमा विस्थापित नगरी उत्कृष्ट नतिजाहरू र सबैभन्दा ठूलो आराम प्रदान गर्न विकसित भएको छ परम्परागत कफी बर्तन। यस कारणले गर्दा, आज त्यहाँ दुबै क्लासिक कफी मेसिनहरू सबैभन्दा शुद्धवादीहरूका साथै सबैभन्दा आधुनिकका लागि छन्।
तिनीहरूलाई राम्रोसँग चिन्नुहोस् अवस्थित कफी मेशिन को प्रकार तपाईले वास्तवमै के खोज्दै हुनुहुन्छ अनुसार उत्तम कफी निर्माता कसरी छनौट गर्ने भनेर जान्न महत्त्वपूर्ण छ। हामी तपाईंलाई यहाँ केहि शब्दहरूमा भन्छौं:
को इलेक्ट्रिक कफी निर्माताहरू कफी वा इन्फ्युसनहरू तयार गर्नका लागि विद्युतीय तताउने प्रणालीहरूले बाह्य तापका स्रोतहरू प्रतिस्थापन गरेका ती सबै हुन्। यस प्रकारको कफी मेकर हो छिटो र अधिक व्यावहारिक अधिकांश घरहरूको लागि। थप रूपमा, उनीहरूलाई परम्परागत जत्तिकै कठिन सरसफाई वा मर्मतसम्भारको आवश्यकता पर्दैन। यस समूह भित्र तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ:
क्याप्सूल कफी मेसिनहरू: तिनीहरू ती हुन् जुन हाल प्रचलित छन्, किनकि तिनीहरू प्रयोग गर्न धेरै सजिलो र छिटो छन्। तपाईंले तयार गर्न चाहनुभएको कफी वा इन्फ्युजनको क्याप्सुल मात्र छनोट गर्नुहोस् (केहीले तपाईंलाई तातो र चिसो पेयहरू तयार गर्न अनुमति दिन्छ), यसलाई मेसिनमा घुसाउनुहोस्, र केही सेकेन्डमा तपाईंले आफ्नो गिलास वा कप तयार पार्नुहुनेछ। यसको दबाब प्रणालीले सामग्रीको स्वाद र सुगन्ध निकाल्न क्याप्सुलको माध्यमबाट तातो पानी पास गर्नेछ र यसलाई गिलास/कपमा बाहिर निकाल्नेछ।
सुपर स्वचालित कफी मेसिनहरू: यी मेसिनहरूले तपाईंलाई कफी बीन्स वा ग्राउन्ड कफी छनोट गर्न अनुमति दिन्छ (समर्थित क्याप्सुलको प्रकारमा निर्भर नगरी बढी स्वतन्त्रता प्रदान गर्दै), तर उनीहरूलाई अघिल्लाहरू जत्तिकै ध्यानको आवश्यकता पर्दैन। तिनीहरू सामान्यतया सही समयमा रोकिन्छन्, तपाईंले तिनीहरूलाई आफैंलाई रोक्न नदिईकन कति गर्नुपर्छ भनेर थाहा भएको प्रणालीलाई धन्यवाद। थप रूपमा, तिनीहरूसँग सामान्यतया अघिल्लो व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा अन्य अतिरिक्त कार्यहरू छन्।
म्यानुअल एस्प्रेसो मेसिनहरू: सुपर-स्वचालितहरू भन्दा फरक, तिनीहरूसँग ग्राइन्डर छैन र कफीलाई प्राइमिङ र थिच्ने प्रक्रिया म्यानुअल रूपमा गर्नुपर्छ। कसै-कसैसँग वाष्पीकरण गर्नको लागि निर्मित सहायक उपकरण छ, त्यो हो, तपाईंलाई स्वचालित रूपमा ती दुधको फोमहरू बनाउन र कफीलाई पेशेवरहरूको विशेष बनावट दिन अनुमति दिन।
बिल्ट-इन कफी निर्माताहरू: तिनीहरू सामान्यतया सुपर-स्वचालित कफी मेसिनहरू हुन्, केवल तिनीहरू अन्य उपकरणहरू जस्तै भान्साकोठामा निर्मित हुन्छन्, जसरी यो वाशिङ मेसिन, डिशवाशर, ओभन, माइक्रोवेभहरू, आदिसँग गर्न सकिन्छ।
ड्रिप वा अमेरिकी कफी निर्माताहरू: यी डिस्पोजेबल फिल्टर र बिजुली ताप स्रोत प्रयोग गर्ने विशिष्ट इलेक्ट्रिक कफी मेसिनहरू हुन्। तपाईं जुनसुकै ग्राउन्ड कफी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मेसिनले तातो पानीलाई ग्राउन्ड कफीबाट पार गर्नेछ र परिणामलाई एकीकृत जगमा ड्रिप गर्न फिल्टर गर्नेछ। यस अवस्थामा तिनीहरू मोनोडोज होइनन्। केहीमा थर्मस जग समावेश छ, त्यसैले तिनीहरूले कफीलाई केही घण्टाको लागि तातो राख्नेछन्।
इटालियन इलेक्ट्रिक कफी निर्माताहरू: इटालियन कफी मेसिन वा म्यानुअल मोका भाँडो जस्तै देखिने र सञ्चालनमा समान, तर विद्युतीय स्रोतद्वारा संचालित। ध्यान राख्नुहोस् कि धेरै इटालियन कफी मेसिनहरूले इन्डक्शन कुकरहरूलाई समर्थन गर्दैनन्, त्यसैले तिनीहरूको विद्युतीय संस्करणको अस्तित्व।
परम्परागत कफी बर्तन
तिनीहरू ती हुन् जुन बाहिरी ताप स्रोतमा निर्भर रहन्छ। तिनीहरू वर्ष पहिले आविष्कार गरिएका थिए र आज पनि अवस्थित छन्। धेरै कफी प्रेमीहरू यस प्रकारको कफी मेसिनमा आफ्नो कफी तयार गर्न जारी राख्न रुचाउँछन्, प्रत्येक विवरणलाई स्क्र्याचबाट नियन्त्रण गर्दै र तिनीहरूले आफ्नो उत्तम कफी नपाएसम्म सम्पूर्ण "अनुष्ठान" पूरा गर्छन्। यसको मतलब तिनीहरू छिटो छैनन् र म्यानुअल प्रक्रिया चाहिन्छ, त्यसैले तिनीहरू सबैका लागि होइनन्। तिनीहरू मध्ये, एक बीच भेद गर्न सक्नुहुन्छ:
इटालियन कफी मेसिनहरू: तिनीहरू धेरै साधारण कफी मेसिनहरू हुन् जसमा तल्लो क्षेत्रमा पानीको ट्याङ्की हुन्छ। यो निक्षेप एक हो जुन प्लेटमा राखिन्छ यसलाई तताउन र पानी उमाल्न। त्यसैले यो एक नाली माथि जान्छ र फिल्टर मार्फत जान्छ जहाँ जमीन कफी पाइन्छ। यसले यसको सुगन्ध निकाल्छ र माथिल्लो क्षेत्रमा पहिले नै फिल्टर गरिएको ट्याङ्कीमा जान्छ।
प्लन्जर कफी निर्माताहरू: प्लन्जर कफी मेकरमा कफी र अन्य कुनै इन्फ्युजन बनाउन अनुमति छ। तपाईंले पानीलाई माइक्रोवेभ वा सस प्यानमा उमालेर तताउनु पर्छ, र त्यसपछि यसलाई कफी मेकरको भित्री भागमा थप्नुहोस् जुन तपाईं इन्फ्युज गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईंले ढक्कन बन्द गर्नुहोस् र प्लन्जरलाई धक्का दिनुहोस् ताकि स्वादयुक्त पानी तपाईंको फिल्टरबाट जान्छ र यसरी तलको मैदान छोड्छ।
कोना वा भ्याकुम कफी निर्माताहरू: यो धेरै वर्ष पहिले आविष्कार गरिएको कफी निर्माता को एक धेरै विशिष्ट प्रकार हो। यसको सञ्चालन, आंशिक रूपमा, इटालियन सिद्धान्त जस्तै छ। यो कफी निर्माताले आफ्नो तल्लो कन्टेनरमा पानी उमाल्नको लागि आगो वा बर्नर जस्ता बाह्य तातो स्रोतको प्रयोग गर्दछ, जसले ग्यासलाई विस्तार गर्छ र दुबै भागहरू जोड्ने नालीबाट माथिल्लो क्षेत्रमा बढाउँछ। त्यहाँ कफी इन्फ्यूज गर्न को लागी स्थित छ। जब यो तातोबाट हटाइन्छ, तल्लो क्षेत्रको हावा संकुचित हुन्छ र भ्याकुम प्रभाव सिर्जना गर्दछ, फिल्टर मार्फत माथिल्लो क्षेत्रबाट कफी चुस्छ। अन्तिम नतिजा तल्लो भागमा कफी पिउन तयार हुनेछ, माथिको मैदान छोडेर।
अन्तमा, औद्योगिक कफी मेसिनहरू तिनीहरू छुट्टै वर्ग हुन्। सामान्यतया, तिनीहरू बिजुलीमा एकीकृत गर्न सकिन्छ, किनकि तिनीहरूले इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टमसँग काम गर्छन्। तर तिनीहरू महँगो, उच्च क्षमता भएका ठूला मेसिनहरू हुन्। यसले तपाईंलाई चाँडै कफी बनाउन र केही अवस्थामा एकै समयमा धेरै कफीहरू बनाउन अनुमति दिन्छ। तिनीहरू क्याफेहरू, बारहरू, रेस्टुरेन्टहरू, होटलहरू, आदि जस्ता आतिथ्य व्यवसायहरूको लागि उपयुक्त छन्, यद्यपि त्यहाँ धेरै छन् जसले तिनीहरूलाई घर प्रयोगको लागि किन्छन्।
सबैभन्दा धेरै बेच्ने कफी निर्माताहरू
अहिलेसम्म भनिएका कुराहरूलाई निरन्तरता दिँदै यी केही हुन् सबै भन्दा राम्रो कफी निर्माताहरू तपाईले यस वर्ष पैसाको लागि उत्तम मूल्यको साथ किन्न सक्नुहुन्छ, कफी निर्माताहरूको प्रकारका अनुसार आ-आफ्नो वर्गका नेताहरू जुन हामीले पहिले नै विस्तृत गरिसकेका छौं:
De'Longhi को लागि सबै भन्दा राम्रो कफी मिसिनहरु मध्ये एक सिर्जना गरेको छ Dolce Gusto क्याप्सुल जुन तपाईले फेला पार्न सक्नुहुन्छ 1500w को पावर र छिटो तताउने प्रणालीको साथ, त्यसैले तपाईंले आफ्नो कफी तयार पार्न एक मिनेट पनि पर्खनु पर्दैन जब तपाईंलाई यो जस्तो लाग्छ। यसको 15 बार दबाबको साथ तपाईले कफी वा इन्फ्यूजन क्याप्सुलबाट सबै भन्दा राम्रो सम्भावित स्वाद दिन सक्नुहुन्छ।
थप रूपमा, यसले 0,8-लिटर क्षमताको पानी ट्याङ्कीलाई एकीकृत गर्दछ, जसले तपाईंलाई यसलाई रिफिल नगरीकन धेरै कफीहरू बनाउन अनुमति दिन्छ। यो रोचक प्रकार्यहरूको लागि बाहिर खडा छ, जस्तै तातो वा चिसो पेय तयार गर्नुहोस्, रखरखाव पहिले भन्दा सजिलो छ हामीलाई धन्यवाद जब यो घटाउने समय हो चेतावनी दिन्छ.
कफी मेसिनहरूको इटालियन निर्माताले यस मेसिनको डिजाइनको ख्याल राखेको छ, स्टेनलेस स्टीलको विवरण र तपाईंले यो यन्त्र राख्नु भएको ठाउँलाई सजाउने आकारको साथ। पनि समावेश छ प्रवाह रोक समारोह जेट स्वचालित रूपमा रोक्न, सबै प्रकारका कप र चश्माहरूको लागि ड्रिप ट्रे सेल्फ-समायोजित गर्ने, निष्क्रियताको5मिनेट पछि स्वचालित बन्द, आदि।
प्रख्यात निर्माता क्रुप्सले अर्को उत्कृष्ट कफी मेसिनहरू सिर्जना गरेको छ नेस्प्रेसो क्याप्सुल जुन तपाईले बजारमा सस्तो मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ। एर्गोनोमिक ह्यान्डल र आकर्षक रंगको साथ यो कम्प्याक्ट र हल्का वजनको मेसिनमा अधिकतम आराम।
यसमा यसलाई खोल्नको लागि बटन छ, र मात्र 25 सेकेन्ड यो तयार हुनेछ र सही तापमानमा पानीको साथ उत्कृष्ट कफी तयार गर्न। सबैलाई ०.७ लिटर क्षमताको ट्याङ्कीमा खुवाइन्छ, कप साइज यसको बटनहरू (एस्प्रेसो र लुङ्गो) सँग मिलाएर, छोटो वा लामोका लागि।
यसको शक्ति र दबाब Bar बार तिनीहरूले ग्यारेन्टी दिन्छन् कि तपाइँ क्याप्सुलबाट ग्राउन्ड कफी बीनको सबै सुगन्ध निकाल्न सक्नुहुन्छ, साथै गुणहरू जुन राम्रो कप कफीबाट अपेक्षा गरिन्छ। पेशेवर कफी मेसिनहरूलाई ईर्ष्या गर्न थोरै दबाब छ।
थप रूपमा, यो छ विरोधी ड्रिप प्रणाली, र स्वचालित बन्द प्रणाली यदि तपाइँ यसलाई9मिनेट भन्दा बढी प्रयोग नगरी छोड्नुहुन्छ भने।
यदि तपाई रुचाउनुहुन्छ भने Tassimo क्याप्सुल, निर्माता बोशले यस उपभोग्य फर्मको लागि अर्को उत्कृष्ट क्याप्सुल कफी मेसिनहरू पनि प्रदान गर्दछ। 1400w पावर, 0.7 लिटर ट्याङ्की, र एक कम्प्याक्ट र आकर्षक डिजाइन यो मेसिन इन्फ्युज गर्न पूरक हो।
यसको साथ तपाईले चयनको स्वादको मजा लिन सक्नुहुन्छ 40 भन्दा बढी पेय सबै मूल स्वाद संग तातो। कुनै जटिल सेटिङहरू छैनन्, केवल तपाईंले चाहानु भएको क्याप्सूल छनौट गर्नुहोस्, बटन थिच्नुहोस् र तपाईंको कप वा गिलास तयार हुनको लागि पर्खनुहोस् (विभिन्न आकारहरूको लागि समायोज्य समर्थनको साथ)।
र राख्न को लागी सफा कफी निर्माता र स्वादहरू मिल्दैनन्, प्रत्येक प्रयोग पछि कफी मेकरले यसलाई तुरुन्तै अर्को फरक पेय तयार गर्न तयार छोड्न दबाबयुक्त स्टीम क्लिनिङ सिस्टम छ।
अर्को ठूलो युरोपेली ब्रान्ड फिलिप्स हो। यसपटक उनको लागि कफी मेकरको मोडल छ सेन्सियो क्याप्सुल कि तपाइँ माया गर्नुहुनेछ आफ्नो स्वाद अनुसार सबैभन्दा उपयुक्त छनोट गर्न एक अभिनव डिजाइन र रङहरूको भीडमा उपलब्ध छ।
यो एक अद्वितीय कफी निर्माता हो, किनकि एकल-डोज भए पनि यसले तपाईंलाई तयार गर्न अनुमति दिन्छ दुई कप कफी एकैसाथ। सबै कुरा छिटो र सजिलैसँग, लामो, नरम, छोटो र बलियो कफीको तीव्रता चयन गर्दै जुन तपाइँ कुनै पनि समयमा चाहानुहुन्छ र तत्काल परिणामको लागि पर्खनुहोस्।
La कफी बूस्ट टेक्नोलोजी राम्रो स्वादको ग्यारेन्टी गर्दै, यसको दबाबको साथ प्रत्येक क्याप्सुलको सबै स्वाद निकाल्न सुनिश्चित गर्दछ। थप रूपमा, क्रेमा प्लस टेक्नोलोजीले सुनिश्चित गर्दछ कि क्रेमा तह राम्रो छ र अन्य इलेक्ट्रिक कफी मेसिनहरू भन्दा राम्रो बनावट छ। र यदि तपाइँ यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्न भने, यसको ऊर्जा बचत टेक्नोलोजीले 30 मिनेटमा यसलाई स्वचालित रूपमा बन्द गर्नेछ।
ओरोली यो एक उत्तम ब्रान्ड हो जुन तपाईले यस प्रकारको किन्न सक्नुहुन्छ इटालियन कफी निर्माताहरू। धेरै मानिसहरू यस प्रकारको परम्परागत कफी निर्मातासँग कफी तयार गर्न रुचाउँछन् किनभने तिनीहरू भन्छन् कि उनीहरूलाई यसको स्वाद राम्रो लाग्छ। तिनीहरू पनि छन् टिकाऊ र सस्तो.
यो हो एल्युमिनियम बनेको, र इन्डक्शन बाहेक सबै प्रकारका भान्साका लागि उपयुक्त छ। यसको पानी ट्याङ्कीमा १२ कपको क्षमता छ, यद्यपि विभिन्न आवश्यकताहरू पूरा गर्न विभिन्न आकारहरू छन्। यसमा दुर्घटनाबाट बच्न सुरक्षा भल्भ पनि समावेश छ।
पुरानो शैलीमा कफीको आनन्द लिनको लागि एक साँचो क्लासिक, कुरकुर सुनेर र यसको सुगन्ध सास फेर्दै। यो तपाइँको घर मा हराइरहेको हुन सक्दैन र एक स्वादिष्ट कफी तयारी को अतिरिक्त, इटालियन कफी मेसिनहरूले एक विशिष्ट स्पर्श थप्छन् त्यो ध्यान नदिनेछ र तपाईंको भान्साको व्यक्तित्वलाई धेरै दिनेछ।
ओरोली - कफी...
यदि तपाइँ एक चाहनुहुन्छ भने सुपर स्वचालित कफी निर्माता, तपाईंले पाउनुहुनेछ सबै भन्दा राम्रो मध्ये एक इटालियन हो De'Longhi Ecam Magnifica15 बार प्रेसर, 1450w पावर, हटाउन सकिने 1.8 लिटर क्षमताको पानी ट्याङ्की, जानकारी हेर्नको लागि LCD प्यानल, क्यापुचिनो प्रणाली, विभिन्न साइजका लागि समायोज्य कफी डिस्पेन्सर, र स्वचालित सफाई।
निस्सन्देह, यो उच्चतम-अन्त कफी मेसिन मध्ये एक हो। यसले ल्याउने प्रकार्यहरूको मात्रा शानदार छ र कफीको अन्त्य मात्र स्वादिष्ट छ। ताजा ग्राउन्ड कफी यसको शीर्ष र अधिकतम स्तरमा स्वचालित ग्राइन्डरको लागि धन्यवाद जब यो आउँछ आफ्नो कफी निजीकृत.
यो घर कफी निर्माता को बारे मा प्रस्ताव गर्दछ व्यावसायिक परिणामहरू यदि तपाई राम्रो कफीको प्रेमी हुनुहुन्छ भने तपाईलाई माया गर्नुहुनेछ। थप रूपमा, यसले तपाईंलाई एकै समयमा दुई कप कफी तयार गर्न अनुमति दिन्छ। र क्याप्सुलहरूमा निर्भर नगरी, यसले तपाईंलाई सबैभन्दा मनपर्ने कफी छनौट गर्न अनुमति दिन्छ।
यदि तपाइँ राम्रो खोज्दै हुनुहुन्छ भने फर्म De'Longhi ले अर्को धेरै राम्रो मोडेल पनि प्रदान गर्दछ हात कफी निर्माता घरको लागि। यस कफी मेकरको साथ तपाईंले 1350 W को पावर र यसको 15 सेन्टीमिटर साँघुरो पारम्परिक पम्पको कारण यसको उच्च दबावको लागि धन्यवाद स्वादिष्ट कफीहरू पाउनुहुनेछ।
केवल ३५ सेकेन्डमा सही तापक्रममा पानी तताउन थर्मोब्लक प्रणालीलाई एकीकृत गर्दछ। यसले कुनै पनि ग्राउन्ड कफी र "ईजी सर्भिङ एस्प्रेसो" पोडहरूसँग काम गर्छ, उत्पादन छनोट गर्दा तपाईंलाई अझ बढी स्वतन्त्रता प्रदान गर्न। साथै, अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईको हो 360º घुमाउने हात "capuccinatore" उत्तम दूध फोम र क्यापुचिनोहरू प्राप्त गर्न मानौं तपाईं एक पेशेवर बरिस्टा हुनुहुन्छ।
संग एक सुरक्षित शर्त पैसाको लागि उत्तम मूल्य मध्ये एक कफी तयार गर्ने प्रक्रियाको आनन्द लिने सबै मानिसहरूका लागि डिजाइन गरिएको।
देलोंगी समर्पित -...
सबैभन्दा धेरै बेच्ने स्वचालित कफी मेसिनहरू मध्ये एक हो ओस्टर प्रिमा लेट, किनकि यसले वास्तवमा के प्रस्ताव गर्दछ त्यसको लागि यसको उचित समायोजन मूल्य छ। तयार गर्न सक्छ स्वादिष्ट cappuccinos, lattes, espressos, साथै भाप दूध राम्रो फोम प्राप्त गर्न।
यो एक पौराणिक एस्प्रेसो मेसिन हो, धेरै वेबसाइटहरू र कफी प्रेमीहरूको मनपर्ने स्वादको लागि यसले अन्य महँगो मेसिनहरू भन्दा धेरै कम मूल्यमा दिन्छ।
यसमा पानी ट्याङ्की छ १ liter लिटर क्षमता, अर्को अतिरिक्त 300 ml दूध ट्याङ्की संग। यसको 1238W पावरको कारण यो चाँडै तात्न सक्छ।
को स्वामित्व को दबाब Bar बार कफीबाट अधिकतम निकाल्न, नतिजामा धेरै क्रीमपन पनि दिँदै। र यो सफा गर्न धेरै सजिलो छ, र फ्रिजमा भण्डारण गर्न दूध ट्याङ्की हटाउन पनि अनुमति दिन्छ।
त्यहाँ मेसिनको दोस्रो संस्करण छ Oster Prima Latte II, अधिक शक्ति र क्षमता संग, र यद्यपि purists अझै पनि मूल रुचाउँछन्, यो अझै पनि एक रोचक शर्त हो।
यो Cecotec इलेक्ट्रिक कफी निर्माता यो यस प्रकार भित्र सबैभन्दा रोचक मध्ये एक हो। घरेलु रोबोटको प्रख्यात निर्माताले पनि कफी मेसिनहरू सुन्दर डिजाइन, कम्प्याक्ट, र प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धीहरूको तुलनामा धेरै राम्रो नतिजाहरू प्राप्त गर्ने गर्दछ।
यसमा इन्फ्युसनका लागि पानी तताउन 1350w को शक्ति छ, यसलाई छिटो बनाउन थर्मोब्लक, Bar बार उत्तम क्रिम र व्यावसायिक कफी मेसिनहरू जस्तै अधिकतम सुगन्ध प्राप्त गर्न दबाबमा, यसले दूधलाई टेक्स्चर गर्न र उत्कृष्ट फोम प्राप्त गर्न स्टीमर समावेश गर्दछ, यसले इन्फ्युसनहरू तयार गर्न तातो पानी बाहिर निकाल्न अनुमति दिन्छ, १.२-लिटर क्षमताको ट्याङ्की, र एक विरोधी ड्रिप प्रणाली।
Cecotec एक्सप्रेस कफी ...
यदि तपाईं ती मध्ये एक हो अमेरिकी वा ड्रिप कफी निर्माताहरू, जर्मन मेलिटा तपाईले किन्न सक्ने उत्तम मध्ये एक हो। यो 1000w (कुशल वर्ग A), 1.25 लिटरको क्षमता, र स्टेनलेस स्टीलबाट बनेको इलेक्ट्रिक फिल्टर कफी निर्माता हो।
स्वादिलो ​​र सुगन्धित लामो वा छोटो कप कफी छनोट गर्नको लागि, थर्मसको साथ जसले कफीलाई २ घण्टासम्म तातो राख्न सक्छ यसको जगको आइसोथर्मल इन्सुलेशनको लागि धन्यवाद। यसमा ढक्कन, एन्टी-ड्रिप फिल्टर होल्डर,2× 1 फिल्टरहरूको लागि अनुकूलता, ह्यान्डल, descaling कार्यक्रम, पानी कठोरता समायोजन, र डिशवॉशर सुरक्षित छ।
यो वास्तविक कुरा हो कोना कफी निर्माता, वा भ्याकुम। बजारमा त्यहाँ धेरै अन्य समानहरू छन् जसले यसलाई अनुकरण गर्ने प्रयास गर्दछ, तर यो मात्र एक हो जसले यस परम्परागत कफी निर्माताको मौलिक डिजाइन, साथै यसको प्रामाणिकता कायम राख्छ, किनकि यो अझै पनि कोना फर्म द्वारा निर्मित छ।
युरोपमा बनेको, दुई कन्टेनरको साथ बोरोसिलिकेट गिलास थर्मल झटका प्रतिरोधी र प्रामाणिक प्रणालीको साथ जसले कफीको सबै सुगन्ध र गुणहरू निकाल्छ भ्याकुम सक्शन प्रभावलाई धन्यवाद जसले यसलाई विशेषता दिन्छ।
कोना कफी मेकरको स्वामित्व लिनु गम्भीर व्यवसाय हो, शैली र व्यक्तित्व को एक सम्पूर्ण ब्रान्ड। यसैले हामी तपाईंलाई अनुकरणबाट भाग्न र मूल कोना खोज्न सुझाव दिन्छौं। यसको मूल्य उच्च छ, तर टिकट अतुलनीय छ।
यदि तपाइँ प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने प्लन्जर कफी निर्माताहरू, Bodum तपाईले किन्न सक्ने सबै भन्दा राम्रो र सस्तो मध्ये एक हो। यो कफी निर्माता छ एक बलियो बोरोसिलिकेट गिलास कन्टेनर, एक पटकमा ८ कप तयार गर्ने क्षमता, र एकीकृत फिल्टर भएको प्लन्जर।
पानी उमाल्दासम्म तताउनुहोस्, कफी मेकरमा ग्राउन्ड कफी वा इन्फ्युजन थप्नुहोस् जुन तपाईंले कफी मेकरमा तयार गर्न चाहनुहुन्छ, यसलाई इन्फ्युज गर्न दिनुहोस् र प्लन्जर थिच्नुहोस्। सबै आधारहरू फिल्टर गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई पृष्ठभूमिमा फसेको छोड्नुहोस्। यसरी तपाईले आफ्नो पेय तुरुन्तै पाउनुहुनेछ।
यस प्रकारको कफी निर्माताले तपाइँको हजुरबा हजुरआमा मध्ये एक भन्दा बढी सम्झाउनेछ, र यो छ सस्तो, व्यवस्थित, ढुवानी गर्न सजिलो विकल्प र यसले सबै प्रकारका इन्फ्युजनहरू बनाउन पनि काम गर्छ।
बोडम १९१३-०१ कफी...
Lelit स्वचालित कफी मिसिनहरु को लागी सबैभन्दा प्रतिष्ठित निर्माताहरु मध्ये एक हो उद्योग को लागी होटल व्यवसायी। स्टेनलेस स्टील सफा गर्न सजिलो, एकीकृत कफी बीन ग्राइन्डर, ठूलो क्षमताको 3.5 लिटर पानी ट्याङ्की, 1200 W पावर, र एक उच्च दबाव प्रणाली संग।
यसमा कफी पाउडर सुकाउन 3-मार्गी भल्भ छ, प्रमुखहरूको समूह एक पटकमा एउटा कफी र एउटा पीतलको केतली तयार गर्न। यो कफी बीन्स, ग्राउन्ड कफी, र कफी पोड दुवै संग उपयुक्त छ। थप रूपमा, यसले वाष्पीकरण गर्न र राम्रो फोम उत्पन्न गर्ने प्रणाली समावेश गर्दछ।
ब्रान्ड आफैले संकेत गरे जस्तै, कफी निर्माता "केवल कफी प्रेमीहरूको लागि": पूर्णतया इस्पात बनेको, फिनिश शानदार छ र यसको कार्यहरू सबैभन्दा बढी माग गर्ने कफी उत्पादकहरूको उचाइमा छन्।
Lelit PL41TEM अन्ना,...
कफी निर्माता कसरी छनौट गर्ने: चरण सारांश
यदि तपाईलाई लाग्छ कि चीजहरू जटिल छन्, हामी प्रक्रियालाई सरल बनाउने प्रयास गर्नेछौं कुन कफी निर्माता किन्न को लागी छनौट गर्दै। तपाईलाई के चाहिन्छ भनेर जान्नको लागि तपाईले के खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईले दिमागमा राख्नु पर्ने पहिलो कुरा हो। केही स्पष्ट देखिन्छ, तर व्यवहारमा त्यो त्यति सरल छैन। अब सोच्नुहोस् तपाईले चाहानु भएको प्रकार छनौट गर्नुहोस् तपाईंको भविष्यको कफी भाँडो तयार गर्न:
कफी मात्र: तपाईंले नेस्प्रेसो, सेन्सियो, इटालियन, इन्टिग्रेबल, आर्म, सुपर-अटोमेटिक, ड्रिप वा अमेरिकी, कोना र औद्योगिक क्याप्सुलहरू (यदि यो व्यवसायको लागि हो भने) मध्ये कुनै एक छनौट गर्नुपर्छ। यस भित्र, तपाइँ कम वा कम आराम चाहानुहुन्छ अनुसार सम्भावनाहरू घटाउन सक्नुहुन्छ:
Automático: नेस्प्रेसो क्याप्सुल, सेन्सियो, इन्टिग्रेबल, आर्म, सुपर-स्वचालित।
Manual: ड्रिप वा अमेरिकी, कोना, वा औद्योगिक।
अन्य इन्फ्युजनहरू (चिया, क्यामोमाइल, लेमन बाम, भ्यालेरियन, ...): तपाईंले Dolce-Gusto, Tassimo, वा plunger कफी मेकर बीच छनौट गर्नुपर्छ। अघिल्लो अवस्थामा जस्तै, तपाइँ सम्भावनाहरूलाई अझ बढी संकीर्ण गर्न सक्नुहुन्छ:
Automático: Dolce-Gusto वा Tassimo क्याप्सुलबाट।
एकचोटि तपाईले के तयार गर्न चाहनु भएको अनुसार तपाईलाई कस्तो प्रकारको मेसिन वा कफी मेकर चाहिन्छ भन्ने बारे स्पष्ट भइसकेपछि, तपाईले निम्न रेखाचित्र देख्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक प्रकारको कफी निर्माताको भिन्नता, र यसरी एक विशिष्ट को लागी छनौट समाप्त गर्नुहोस्:
क्याप्सुल को: छिटो, सरल र व्यावहारिक।
नेस्प्रेस्सो: परिणाम एक धेरै तीव्र कफी हो, एक धेरै राम्रो शरीर र सुगन्ध, साथै सही बनावट संग। क्याप्सुलहरू Dolce-Gusto वा Tassimo को तुलनामा धेरै सीमित छन्, किनकि तपाईंले कफी मात्र पाउनुहुनेछ, विभिन्न प्रकारका, तर मात्र।
Dolce Gustoजोडी: तीव्र कफी, राम्रो सुगन्ध, राम्रो फोम र बनावट। विभिन्न प्रकारका कफी क्याप्सुलहरू (एस्प्रेसो, स्पट, कट, डिक्याफिनेटेड,...), साथै दूध चिया, चिसो चिया, र अन्य तातो र चिसो पेय पदार्थहरूको विस्तृत विविधताको साथ।
Tassimo: यद्यपि गुणस्तर अघिल्लो दुई जत्तिकै उच्च छैन, यसले समान परिणामहरू प्रदान गर्दछ। थप रूपमा, तपाईंले फेला पार्न सक्ने क्याप्सुलहरू धेरै फरक छन्, जस्तै Dolce-Gusto को मामलामा। धेरै विविध कफी देखि इन्फ्युसन र अन्य प्रसिद्ध पार्टी पेय सम्म। 40 भन्दा बढी विभिन्न प्रकारका साथ, यो सबै भन्दा राम्रो विकल्पहरू मध्ये एक हो यदि तपाइँ सबै भन्दा माथि विविधता खोज्दै हुनुहुन्छ।
सेन्सेओ: यो Nespresso संग जस्तै हुन्छ, यो विविधता को मामला मा केहि अधिक प्रतिबन्धित छ। यस मामला मा कफी गुणस्तर Tassimo को जस्तै छ।
सुपर स्वचालित, हात वा एकीकृत: यी तीन समान परिणामहरू छन्। मा प्राप्त ती जस्तै कफी व्यावसायिक औद्योगिक कफी मिसिनहरू, र वापोराइजर हातको फाइदाको साथ उच्च-गुणस्तरको फोम सिर्जना गर्न जुन तपाईंले क्याप्सुलहरूमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, न त अन्य इलेक्ट्रिक वा परम्परागतहरूमा।
अन्य बिजुली: अमेरिकी वा ड्रिप कफीको लागि, अघिल्लोहरू जस्तै सजिलो र छिटो नहुनुको अतिरिक्त, कफीको नतिजा धेरै सफा छ, विभिन्न सुगन्ध र स्वादहरूलाई प्रशंसा गर्न अनुमति दिन्छ। यसका बावजुद, राम्रो कफीका प्रेमीहरूले तिनीहरूलाई धेरै कदर गर्दैनन्। यसको सट्टा, तिनीहरू सस्तो चीज खोज्दै, कुनै पनि कफी प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रताको साथ, र जो एकै पटक ठूलो मात्रामा कफी बनाउँछन् र एकल-सेवा गर्दैनन् तिनीहरूका लागि राम्रो हुन सक्छ।
Tradicionales: प्रक्रिया अघिल्लो जस्तै सहज छैन। तपाईंले परिणाम प्राप्त नगरेसम्म म्यानुअल रूपमा प्रक्रियालाई चरणबद्ध रूपमा पूरा गर्नुपर्छ।
इटालियन: तिनीहरूले तपाईंलाई धेरै स्पष्ट सुगन्धको साथ राम्रो कफी तयार गर्न अनुमति दिन्छ। तिनीहरू पनि सस्तो छन् र प्रयोग गर्न जटिल छैन, यद्यपि प्रक्रिया ढिलो छ। यद्यपि, यसले तपाईंलाई आकारको आधारमा एक पटकमा एक भन्दा बढी कप बनाउन अनुमति दिन्छ।
सोली: यदि तिनीहरू प्रामाणिक कोना हुन् भने, परिणामहरू धेरै राम्रो छन्। कफीलाई अरूको तुलनामा कम तापक्रम (लगभग 70ºC) मा इन्फ्युज गरेर, यसले कफीलाई यसको अर्गानोलेप्टिक गुणहरू अन्य प्रकारहरू भन्दा राम्रो बनाउँछ।
डुबाउने: तिनीहरूले अघिल्लो जस्तै परिणामहरू प्रस्ताव गर्न सक्छन्। तिनीहरूको सबैभन्दा ठूलो बल यो हो कि तिनीहरू धेरै सस्तो र वृद्ध मानिसहरूका लागि आदर्श छन् जसलाई कसरी आधुनिक प्रयोग गर्ने थाहा छैन वा जो आफ्नो जीवनलाई जटिल बनाउन चाहँदैनन्।
इन्डस्ट्रियल्स: व्यवसायहरूका लागि, उनीहरूले प्रस्ताव गर्ने सुविधाहरूको कारणले व्यावसायिक स्वाद र बनावटहरू प्राप्त गर्दै। तिनीहरू अधिक महँगो र ठूलो छन्। यी प्रकारका एस्प्रेसो मेसिनहरू म्यानुअल हुन्, यद्यपि त्यहाँ सुपर-स्वचालितहरू पनि छन्।
के कफी किन्न?
तपाईंले प्रयोग गर्नुभएको कफी निर्माताको प्रकारमा निर्भर गर्दै, तपाईंलाई एउटा कफी वा अर्को चाहिन्छ। हुनसक्छ तपाईको कफी निर्माताले धेरै प्रकारका कफीलाई समर्थन गर्दछ। तिनीहरूमध्ये प्रत्येकको आफ्नै विशेषताहरू र चालहरू छन्। कति प्रकारका छन् थाहा छ कफी क्याप्सुलहरू अवस्थित छ? छनौट गर्न को लागी रहस्य के हो सबै भन्दा राम्रो जमीन कफी? र यदि तपाइँ खरिद गर्नुहुन्छ कफी बीन्स, यसलाई कसरी राम्ररी पीस गर्ने?
कफी सामान: आवश्यक
कफीको संसार विशाल छ र यदि तपाइँ यो पेय मनपर्छ भने तपाइँ उपलब्ध विकल्पहरूको संख्याबाट छक्क पर्नुहुन्न। कफी अनुभवलाई अनौठो कुरामा बदल्नुहोस्। धेरैको लागि यो एक अनुष्ठान पनि हो। यद्यपि, त्यहाँ धेरै सामानहरू छन् जुन आवश्यक देखिन्छ: दूध भाइहरू क्रीमपनमा उत्कृष्टता हासिल गर्न, कफी ग्राइन्डरहरू एक उत्तम बनावट वा थर्मोसेसहरू सुरक्षित गर्न र तपाईंको आफ्नै कफी ढुवानी गर्न। जाँच गर्नुहोस्।
1 बजारमा उत्कृष्ट कफी मेसिनहरू
2 कफी मिसिन को प्रकार: आदर्श के हो?
2.1 इलेक्ट्रिक कफी निर्माताहरू
2.2 परम्परागत कफी बर्तन
2.3 औद्योगिक कफी मेसिनहरू
3 सबैभन्दा धेरै बेच्ने कफी निर्माताहरू
4 कफी निर्माता कसरी छनौट गर्ने: चरण सारांश
5 के कफी किन्न?
6 कफी सामान: आवश्यक
कोना कफी मेसिन र भ्याकुम कफी मेसिनहरू
Bialetti कफी मेसिनहरू
बोश कफी मेसिनहरू
ब्रा कफी निर्माताहरू
Cecotec कफी मेसिनहरू
DeLonghi कफी निर्माताहरू
डेल्टा कफी निर्माताहरू
डोल्से गुस्टो कफी मेसिनहरू
Illy कफी मेसिनहरू
जुरा कफी निर्माताहरू
क्रुप्स कफी मेसिनहरू
Lavazza कफी मेसिनहरू
मेलिटा कफी मेसिनहरू
MiniMoka कफी निर्माताहरू
सस्तो नेस्प्रेसो कफी मेसिनहरू
Orbegozo कफी मेसिनहरू
ओरोली कफी निर्माताहरू
ओस्टर कफी निर्माताहरू
फिलिप्स कफी मेसिनहरू
Saeco कफी मेसिनहरू
सेन्सियो कफी मेसिनहरू
Smeg कफी मेसिनहरू
Solac कफी निर्माताहरू
Tassimo कफी मेसिनहरू
Ufesa कफी मेसिनहरू
कफी क्याप्सुल को प्रकार
सस्तो कफी मेसिनहरू 2022 - गोपनीयता नीति - सम्पर्क